ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ – စောဖိုးခွား | အိုးဘို
ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ – စောဖိုးခွား
Posted: November 14, 2011 in Music, Review
Tags: စောဖိုးခွား, ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ, Myanmar Raggae Artist, Phyae Phyae Youth Pha, Saw Phoe Khwar, Take it Slow Homie
မြန်မာပြည်မှာ Raggae ဆိုတာအရင် ချစ်ကောင်းချည်းပဲရှိမယ်ထင်တယ် ။ အခုနောက် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာပြီဗျ ။ ဒီဘဲကြီးရဲ့ ဂီတကို ပြင်သစ်သံရုံးမှာ one love band နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေတုန်းကတည်းက ခိုက်နေတာ ။ ဒီအခွေလက်ထဲရောက်မှ စိတ်အဆာပြေတော့တယ် ။
စောက်ရမ်းမိုက်တယ် ၊ Raggae စစ်တယ်လို့ပြောရင် ကျွန်တော်လွန်မလား . . . ။မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီဂီတကို ဒီလိုဖန်တီးပြထားတာ တော်တော်လန်းတယ်ဗျ ။ အစကနေ အဆုံးထိတစ်ပုဒ်မှကျော်ပြီး နားထောင်စရာမလိုအောင် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေး ဖန်တီးထားပါတယ် ။ ၁၉ လမ်းသီချင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ် . . နောက်ဆုံးbonustrackအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့ချစ်ကြပါကတော့ဒီအယ်လဘမ်ရဲ့အနှစ်ပဲ . .
Raggae တွေကြိုက်တဲ့ ကရင်ကြီးအတွက်နောက်ထပ် အငွေ့ပျောက် တစ်ရှိက်လောက်ရှိုက်သွင်းရင်း သံစဉ်တွေကြားစီးမျောကြည့်ရအောင်လားဗျာ . . .
၀၆ ထားခဲ့ဟေ့ ….
၁၁ ချစ်ကြပါ (Bonus Track ..with EULOGIA Group)
ဒီ link ကနေလဲတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ် ။
ဦးချစ်ကောင်းထက် ဒီကရင်ကြီးရဲ့ရူးသွပ်မှုအစစ်အမှန် ကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျ.. ဒီဘဲကြီးရက်ဂေးနိုင်ငံတွေကပြန်လာပြီ မြန်မာပြည်မှာ ရက်ဂေးအစစ်ကိုချပြတာ.. အစသီချင်း ရက်ဂေးရူးမှာတင် ငြိမ့်ငြိမ်ညောင်းညောင်းလေနဲ့ မြောက်နေပြီ ရက်ဂေးမှာသူကပိုစစ်တယ်လို့ထပ်ပြောရင်ဖြစ်မလားမသိဘူး ဦးချစ်ကောင်းထက် သူကပိုမြောက်တယ် ရက်ဂေးနဲ့ပဲနေထိုင်တဲ့ကရင်ကြီးပါဗျာ.. အားပေးလိုက်ကြစို့လား ကျွန်တော်ကတော့ အ၇မ်းကြိုက်လို့ အော်ရီ၈ျင်ပဲဝယ်သိမ်းထားတယ်ဗျ.. အနုပညာသမားစစ်စစ်တွေကို အားပေးလိုက်ကြစို့ဗျာ……..
သူ့ ကို Silver Oat Cafe မှာတွေ့ ဖူးတယ်ထင်တယ်ဗျာ။
ညဖက် ဒီAlbum ထဲက “တိုင်ပတ်နေပြီ” ကိုဆိုတာမြင်ဖူးတယ်။
ဒါပေမယ့်သူ့ ကိုယ်တိုင်လားသူ့ သီချင်းယူဆိုတဲ့သူလားတေ့ာမသေချာဘူးဗျာ။
အဲကတည်းကတော်တော်ကြိုက်တယ်၊နောက်သူက Studio တစ်ခုမှာလည်းအသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာလားဗျ။
အဝေးရောက်နေလို့ အခွေကိုအားမပေးနိုင်တာတေ့ာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။အခုလိုတင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါဗျို့။ 🙂
Nya Khinn says:
အကိုတို့ရေ ကူညီပါဦးဗျာ ကျနော်အဲ့သီချင်းတွေ ရှာနေတာ ၈လလောက်တောင်ရှိတော့မယ်။
LiL' Kost says:
လင့်တွေ သေနေတယ် …အကို …
ရပီ ..ခင်ဗျ …တော်တော် မျောသွားတယ် …၃ ခေါက်လောက် ပြန်နားထောင်နေရတယ် ..
ကြိုက်လွန်းလို့ …….ကျေးဇူးပါဗျာ ….. 🙂
ရတယ်ဆို အိုကေဗျာ ။ သူတို့ upload လုပ်ထားတဲ့ Link ကိုပြန်သုံးထားလို့ဗျ ။
ကဗျာဆရာ လှသန်း (ခ) ကြည်မောင်သန်း – ကွယ်လွန်ခြင်းတစ်လပြည့်ဆွမ်းသွတ်အလှူ